Maraykanka oo sheegay in uu weerar ka fuliyay Soomaaliya - BBC News Somali
Maraykanka oo sheegay in uu weerar ka fuliyay Soomaaliya
Maraykanka ayaa sheegay in duqaymo uu ka fuliyay Soomaaliya lagu bartilmaameedsaday sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Al-shabaab.
Af-hayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon, ayaa sheegay in diyaarad bilaa duuliye ahi weerar ku qaaday meel u dhow magaalada Jilib ee ku koonfurta Soomaaliya.
Waxa weerarka lagu bartilmaameedsaday Xasan Cali Dhoorre oo ahaa xubin sare oo ka tirsan Al-Shabab oo lagu tuhunsanaa inuu maleegay qarax ka dhacay garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo huteel magaalada ku yaalla oo dad Maraykan ah lagu dilay.
Hayeeshee war warbaahinta dawladda Soomaaliya ay ka soo xigatay abaanduulaha milatariga Soomaaliya Janaraal Cali Baashi ayaa lagu sheegay weerar ay qaadeen kooxda Komaandooska ee milatariga Soomaaliya in lagu dilay Xasan Cali Dhoore gobolka Shabeellaha hoose.
Ilo madaxbanaan ayaa BBC-da u sheegay in Xasan Cali Dhoore iyo labo qof oo la socday oo watay gaari nooca rooneytka ah ay diyaarad aan duuliye lahayn ay ku dhafutay dhawr gantaal habeenkii jimcuhu soo galayay meel ku dhaw degmada Kabsuuma ee gobolka Jubada Hoose .
Dhammaan dadkii gaariga saarnaa ayaa dhintay oo uu ku jiray sarkaalka bartilmaameedka ahaa ee Xasan Cali Dhoore.
Wali ma jiro wax wara oo ka soo baxay Al-Shabaab oo xaqiijinaya ama beeninaya weerarkan iyo ninka lagu dilay.